COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် KIO နဲ. ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ.တွေ.ဆုံ - Yangon Nation News
COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် KIO နဲ. ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ.တွေ.ဆုံ
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို. KIO ဗဟိုကော်မတီကဖွဲ.စည်းထားတဲ့ COVID-19 ရောဂွကာကွယ် နှိမ်နင်းရေးကော်မတီနဲ. ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနေဝင်းဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ.တို.ဟာ မိုင်းဆတ်ပါကျေးရွာမှာ
အဲဒီတွေ.ဆုံပွဲမှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ကုသနှိမ်နင်းရေးနဲ.ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီကိစ္စနဲ.ပတ်သက်ပြီး KIO ဗဟိုကော်မတီက ကြေငြာချက်တစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ရာမှာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးကလည်း ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရ့်စဲရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ထားကြောင်း၊နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးကလည်း နိုင်ငံတော်၏ပိုင်နက်နယ်မြေအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်သူမည်သူ.ကိုမျှချန်လှပ်မထားရေးမူဝါဒ အရ COVID-19 ကပ်ရောဂါကိုထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာကြေငြာချက်များထုတ်ပြန်သင့်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် KIO ဗဟိုကော်မတီအနေဖြင့် ယခုကဲ့သို. ကပ်ရောဂါကျရောက်နေချိန်မှာ စစ်ရေးကိစ္စများကို အဓိကမထားပဲ ကပ်ဘေးရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ကိစ္စတွေကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို. ဆိုပါတယ်။
၂၀၂၀ခုနှစ် မေလ ၁၃ ရက်နေ.မှာ တွေ.ဆုံခဲ့ကြတဲ့ KIO
ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ.၊COVID-19 Concern & Response Comittee – Kachin(CCRC-K) ၊ ကချင်အမျိုးသားများ အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ.(WMR)၊ Paace-talk Creating Group(PCG) တို.ဟာ COVID-19 ကပ်ဘေးရောဂါကာကွယ်ကုသနှိမ်နင်းရေးကိစ္စရပ်တွေကို အတူတကွလက်တွဲ ဆောင်ရွက်သွားကြမယ်လို.လည်း
KIO ဗဟိုကော်မတီက ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေငြာချက်မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။
Photo – Kachin Information Committee NLD
မေ ၃၁ ရက်အထိ Stay at Home တိုးမြှင့်
ရုရှား သံအမတ်ကြီး Mask ပြိုင်ပွဲဝင်မယ်